July 2021 - Myanmar People Alliance
Unicode ဒါဏ်ဖြစ်ပြီး မကြာခဏခါးနာနေသူများ ကြက်ခြေထောက်သုံးချောင်းကိုနူးအိသည်အထိ ပြုတ်ပါ … ပြီးလျှင် အသင်.ပြင်ထားသည်.ဂွေးတောက်ရွက်လက်တစ်ဆုပ်ကိုထိုကြက်ခြေထောက်ပြုတ်အိုးထဲသို့သုံးမိနစ်ခန်.ထည်.မွှေပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲသို့ထည်.သောက်ပါ။သုံးကြိမ်သောက် ပျောက်ပါပြီ… ဂွေးတောက်ရွက်အသုံးဝင်ပုံအရွက်ကို မီးကင်ပြီးကပ်လျှင်အနာစိမ်း၊ သွေးစုနာများနုလျှင်ပိန်၍ င်လျှင် ပြည်ပေါက်၍ ပျောက်၏… ထန်းရည်၊အရက်၊ ကြာရှည်စွာ သောက်သုံးသူများတစ်နှစ်တစ်ခါ ခွေးတောက်ရွက်ကို
Unicode သင်၏လက်မတွင်ပါရှိသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စပါးစေ့လို သေး ချွန် ပြီးပိတ်ေ နရင်အိုဇာတာကောင်းပါတယ်မိမိရှာသည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကူညီသည် ဖြစ်စေပြည့်စုံပြီး မပူပင်ရပါ . စပါးစေ့ပုံမဖြစ်ပဲဟနေရင်မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေရင်ဆင်းရဲချမ်းသာမဟူမိမိကရှာသူများကသုးံကိုယ့်မရှိရင်သူများကလာမပေးတဲ့ကံမျိုးပါအိုဇာတ ကောင်းလိုလျှင် မာနများကိုခဝါချပြီးနူးညံ့မှု များနဲ့ အစားထိုးပါ။ဆုပ်သောလက်များလွှတ်ချပြီး ဖြန့်သောလက်ဖြင့်ကြိုဆိုပါ။အပိုကိစ္စလျော့ချပြီးဘာသာရေးကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်ပါ။တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကိုကျောခိုင်းပြီးမျှတစိတ်ဖြင့်တည့်မတ်ပါ . . . . .
Unicode လုပ်နည်းကသိပ်မခက်လှပါဘူး လိုအပ်တာကသကြားရယ်၊သံပရာသီးတစ်ခြမ်းရယ် ၊vasaline ရယ်ပေါ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုတစ်ဆင့် ခြင်းမပြောသွားမှီ ဆေးလိပ်မသောက်သူတွေလည်းလုပ်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ် အားလုံးအတူတူပါပဲနုတ်ခမ်းဟာလည်းလူတစ်ယောက်မှာအရေးပါလှပါတယ်တစ်ချို့ကပြောကြတယ်ရုပ်လှစရာမလိုဘူးစိတ်လှဖို့ကအဓိကပါတဲ့ဒါပေမဲ့ ပြောပြမယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်အလုပ်သွားလျောက်ပြီဆိုပါစို့သင့်အလုပ်ရှင်ကလူကို စတွေ့တာလားရုပ်ကိုအရင်စတွေ့တာလား ရုပ်ကိုအရင်စတွေ့တာလေပြီးမှသင့်ရဲ့ကြိုးစားမှု နဲ့ရိုးသားမူ့ကိုသူတို့တွေ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ရုပ် ကအင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ရုပ် မှာတောင်စတွေ့ရတာကမျက်နှာဗျာ ဒါကြောင့်အပစ်ပြောစရာမရှိအောင် လှပဖို့နုတ်ခမ်းလေးကလဲလိုအပ်ပါတယ် ဒါကြောင့် မဲနေတဲ့နုတ်ခမ်းကို ပြန်ဖြူ
Unicode ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမဲဝိဇ္ဇာတသိန်းကျော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများ၏ မေတ္တာဆေးကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးနေ့တိုင်းသောက်နေတဲ့ဆေးလေးပါလည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ပိုးမွှားများကင်းစင်သလိုချောင်းဆိုးခြင်း ချွဲပူထခြင်း အသက်ရှူမဝသောသူများအနေ့ဖြင့်လည်း ဒီဆေးအငွေ့များအားပျင်းပျင်းရှူရှိုက်ပေးခြင်းဖြင့်အသက်ရှူမှု့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာကိုလည်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးအင်အားသိပ်ကုန်ကျမှု့မရှိဘဲအင်မတန်သက်သာသောဆေးနည်းလေးပင်ဖြစ်ပေသည်ပါဝင်သောပစ္စည်းများကတော့ လ္ဘက်ခြောက်အနည်းငယ်ဂျင်းပါးပါး၅ခုခန့်ပင်စိမ်းရွက်၂၀ ရွက်တောရှောက်ခါးတစိပ်ခန့်တို့အားပွက်ပွက်ဆူနေသောအိုးထဲသို့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ရောထည့်ပြီးနှပ်ထားပေးပါနံ့အသက်မရသောသူများအိုးကိုဖွင့်ပြီး အငွေကိုရှူပေးရသလို လည်ချောင်းကပိုးမွှားများကင်းစင်အောင်လည်း သောက်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဆေးနည်းလေးအတိုင်း သောက်လာတာကြာခဲ့ပါပြီနောက်ပြီး ဝိတ်တက်နေသူများလည်းဝိတ်ပါကျပါသည်နော်အစာအိမ်ရောဂါရှိသောသူများ တောရှောက်ခါးသီးကိုလိုတိုးပိုလျော့ပြုလုပ်ပေးရသလို ဆီးချို သွေးတိုးသမားများအတွက်လဲအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်နော်ခေါင်းကိုက် ဇက်ကြောတတ်မှု့တွေကိုလဲသက်သာပျောက်ကင်းခြင်းနှင့်ခံတွင်းအနံ့အသက်များပါကောင်းမွန်ပါသောကြောင့်အခုလက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်ပါနော် ဒီတခွက်ဆိုလျှင်တနေကုန်တဲ့အထိလူတယောက်စာသောက်သုံးလို့ရပါတယ်နော်မေတ္တာဖြင့်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးသောအမျိုးများကိုဗစ်ကင်းစင်ကြ၍လိုအင်ဟူသမျှပြီးပြည့်စုံစွာရရှိကြစေပြီးားလုံးကပ်ဆိုးကြီး များဘေးအမျိုးမျိုးတို့မှကင်းဝေးကြပါစေဟုသူ၏လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်
Unicode မီးဖိုချောင်မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီပစ္စည်း(၁၁)မျိုးကမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်အထူးဂရုစိုက်သင့်တယ် ၁။ ပလပ်စတစ်ထမင်းဘူး ပလပ်စတစ်ကိုပိုပြီးတော့ ပြုပြင်ရလွယ်အောင်လို့ တချို့ထုတ်လုပ်သူတွေကဓာတုပစ္စည်းတွေ ထည့်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီဓာတုပစ္စည်းတွေက ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ပြဿနာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒီဓာတုပစ္စည်းတွေကို သင့်အစားအသောက်နဲ့သင့်ကိုယ်ထဲမှာတော့မလိုချင်လောက်ပါဘူးနော်။ ၂။ မီးဖိုချောင်ဘေစင် သင့်ဟင်းလျာထဲကအစားအသောက်တွေကသင့်ဘေစင်မှာတစ်ခါတလေကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီကျန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘကျတီးရီးယား မွေးဖွားလို့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ ဒါဆိုမီးဖိုချောင်ဘေစင်ကတကယ့်ကိုညစ်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၃။
Unicode သင်အိပ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကိုသတိထားပါ…ဒီညပဲမအိပ်ခင်အပေါ်ဖုံးကိုချွတ်ကြည့်ကြပါ အသက်(36)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Armsဟာကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးသမား ဖြစ်တာကြောင့်ခရီးပန်းတာပဲလို့ယူဆပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခဲ့ပေမယ့်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိဒဏ်ရာကမသက်သာလို့သူ့မှာအဖျားရောဂါရှိနေပြီထင်ကာဆေးခန်းကိုသွားပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့စစ်ဆေးမှုမှာလည်းတစ်ခြားထူးခြားမှုကိုမတွေ့ရလို့အဖျားကျဆေးကို ပေးပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်. သွေးအဖြေကလည်းဘာမှထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်အကြာမှာပဲStewartဟာ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာသွေးခဲတွေပါလာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ရောဂါကိုသသေချာချာစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပြီး ရောဂါရဲ့အဖြေကတော့“အဆုတ်ကို
ေရခ်ိဳးလိုက္႐ုံနဲ႔သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမယ့္ ‘ေလးဘက္နာေရာဂါျဖစ္ေနေသာတိုက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ နတ္ေဆးတလက္ ”’
Unicode ေရခ်ိဳးလိုက္႐ုံနဲ႔သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမယ့္ ေလးဘက္နာ ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာတိုက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္နတ္ေဆးတလက္ တိုက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္နတ္ေဆးတလက္အဲဒီအမက ေလးဘက္နာ ေရာဂါ ျဖစ့္လို မသြားႏိုင္မထႏိုင္ နဲ႔လက္ေတြ ေျခေထာက့္အဆစ္ေတြ ေရာင္ကိုင္းပီး ေလးဘက္နာ ေရာဂါ ျဖစ္ေနတာကို ပုံပါအပင္ရဲအ႐ြက္ကို ျပဳတ္ပီး ေရခ်ိဳးသလိုခ်ိဳးေပးယုံပါဘဲထိုအ႐ြက္ျပဳတ္ေရနဲခ်ိဳးလ်င္ဆပ္ျပာလုံးဝမတိုက္ရပါ ။ခ်ိဳးေနရင္းနဲမီးနစ္အနည္ငယ္
Unicode ရေသန့်ကိုရနွေးကျိုသောက်တာမဟုတ်ပဲထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာသုံးမိကင်ဆာဖြစ်စေနိုင် ရေသန့်ကိုထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာသုံးမိတယ်။ရေသန့်ကိုရနွေးကျိုသောက်တာမဟုတ်ပဲနေပူထဲချထားရင်တောင် ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ရေသန့်ဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းဆေးခပ်ရပါတယ်။ရေသန့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကလိုရင်းဓာတ်ကအပူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ကလိုရိုဖောင်းဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီးကြာရှည်အပူပေးသုံးစွဲလာတဲ့အခါမအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်း အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပြီးကင်ဆာဘက်ကိုနွယ်လာနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ် မယုံရင်ဆက်ပြီး အပူပေးကျိုသောက်ကြပါဖြစ်ရင်ခံကြပါ။ရိုးရိုးရေသန့်သည် ph7ပါ။ph7ကိုထပ်သန့်စင်ရင်အယ်လ်ကာလီ ရေသန့်ဖြစ်လာပါတယ်။အယ်လ်ကာလီ သောက်ရေသန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အယ်လ်ကာလီသောက်ရေသန့်သည်ကျန်းမာရေးအတွက်အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။အယ်လ်ကာလီ ကေနအယ်လ်ကာလိုင်းထိထပ်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ရေသန့်ဆိုတာ ရေစစ်နဲ့
Unicode နှာရည်ကျ၊တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေသူများနှင့်အဆုတ်အားကောင်းစေတဲ့ဆားငွေ့ ဆားငွေ့ရှုနည်း တစ်ဆောင်းတွင်းလုံးနှာစေးနေခဲ့ရင်၊လူရှေ့သူရှေ့မရှောင်နှာရည်ကျ၊ နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့ရင်အလွယ်တကူနဲ့သက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ဆားငွေ့ရှုတဲ့နည်းပါဘဲ။ ငွေမကုန်ပဲသက်သာစေမဲ့မီးဖိုချောင်က ဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ဟင်းရည်သောက်ကြွေပန်းကန်လုံးထဲမှာပရုပ်ဆီအနည်းငယ် သုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဆား ဟင်းစားဇွန်းနဲ့၃ဇွန်းထည့်ပါ။ဆူပြီးသားရေနွေး သို့မဟုတ်ဓာတ်ဘူးထဲကရေနွေးပူပူလောင်းထည့်ပါ။တက်လာတဲ့ဆားအငွေ ့ကိုဦးခေါင်းမှာတဘက်ပုဝါတစ်ထည်ခြုံပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲကတက်လာတဲ့ အငွေ့ကို ရှုပေးပါ။ အငွေနှာခေါင်းထဲရောက်အောင် သေချာရှူပေးပါ။ပင်လယ်ထဲကဆားငွေ့လေရှုသလိုမျိုးအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဆားငွေဟာအဆုတ်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ် နှာစေးတဲ့အရည်ထွက်ကျခြင်းကိုလည်ထိန်းစေပါတယ်။
Unicode အဲကွန်းနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွဝယ်ရင်ဒါလေးတွေကိုစစ်ပါမဟုတ်ရင်အိမ်တွင်းသူခိုးတကောင်ရောက်နေသလိုပါပဲ အဲကွန်းနဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်အဲဒါကိုကြည့်ပါ အဲဒါလေးကို Star ratingလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒါမပါရင်ဘာတံဆိပ်ဖြစ်ဖြစ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကကိုယ်တိုင်တိုင်းကြည့်မှကောင်းမကောင်းသိရမှာပါ။ ပုံမှန်ကတော့1-Star ကနေ 5-Star ထိရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် Ratingသတ်မှတ်ချက်တော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကဆိုယိုးဒယားနဲစင်္ကာပူ နိုင်ငံတွေရဲ့ Rating ကအစစ်အမှန်ရထားတာဆိုရင် တကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ 5-star အဆင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက